Author: Zulkimi Didal
Kalmad tarbiico leh in gabayga laga dhawro sawtay muhiimka ahaan jirtay.
Bulshada Soomaaliyeed, yar iyo weyn, waxaa suurtagal ah in uu qof xafidiyo maanso qarniyo dhowr ah cimrigeedu yahay. Bal ha iska yimaado oo wax uun hasoo diro ayuu yidhi Camanje. Musdambeed Taariikheed Saciid Saalax Axmed. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta.
Wuxuu ka dhawray qadaf, gagayada dalab leh, iyo wax kasta oo anshaxa iyo dhadhanka gabayga dili kara, islamarkaana wuxuu nimankii u raddiyey si aysan kasoo waaqsan karin. Recitation of Holly Quran by Sh. Gabaygiisii jawaabta ahaa wuxuu u bixiyey Duraaqsi.
Maqal Maxaa ka dhalan kara ka bixitaanka ciidammada Mareykanka ee dalka Suuriya? Waxay socotay mudo dheer waxaana aakhirkii bud-dhige u noqday Maxamed Cumar Dage oo habeenkii ay bil kowsatay waa wiil la yidhi.
gabyaada Gabay ama gabaygu waa maanso ama qayb ka mid ah suugaanta Af Soomaaliga ama mida caansan Suugaanta Soomaalida. Hurgumo waa silsilad aadkii uu shiniyeeyey Khaliif Sheekh Maxamuud. Nasiib xumo tixdaa uu balan qaaday wakhtigu kuma simin inuu na soo gaadhsiiyo oo isaga oo aan wali tirin ayey tii Alla u timid. Dharbaaxo Jin wuxuu gabay-hayeen u ahaa Soomaalida inteeda kale Khaliifna qoyskiisa.
Fanka iyo Suugaanta Soomaalida. Qawdhan ayuu haddaba arintaa ku gawriyey oo wuxuu Xarbi mariyey tix ay ka mid ahaayeen beydadkan hoose.
Somali poetry/Gabayada Soomaalida | Puntish
Abwaan Cabdullaahi Dhoodaan oo mudo dheerba mucaarad ku ahaa dowladii Maxamed Siyaad, gabayo badan oo. Daahir waxna ma qoro waxna ma aqriyo. Shanta beyd ee ugu dambeeya wuxuu Dhoodaan ku qeexayaa in aanu la caytamaynin, ee uu ilaalin doono anshaxa iyo asluubta gabayga, soomalaida iskala weyn yahay oo uusan la qasan doonin laba nin oo isqabatana aysan ahayn. Muddo kale ayuu sugay oo sugay. Gabay kasta oo abwaanku unko waxaa ku xambaara dareen ama sabab gooni ah.
Markii cid fariin baan ku wadaa dhagta u saarta uu waayey ayuu mar kale afkiisa furtay oo uu tiriyey gabay ay ku jirtay: Dhoodaan wuxuu isticmaalay fan. Habka ku luuqaynta suugaanta maansada, gaar ahaan hooyaalayeey ayaa wuxuu bilowday waayihii abwaanka caanka ah ee Raage Ugaas Warfaa, isuguna noqday qofka habkaas soo caanbixiyay. Abshir Nuur Faarax Bacadle isagoo ninkaa u digaya ama tusaalaynaya waa kii lahaa: Maansada silsiladda ahi waa kuwa loogu dhagaysi iyo xiisaba badan yahay.
Dhoodaan gabayga uu silsiladdan ku leeyahay ayey magacyada abwaanada ka qeyb qaatayi ku dhan yihiin. Waxaa u jawaabay Yuusuf Colaad oo waxaa ka mid ahaa jawaabtiisii. Waxaa ka mid ahaa beydadkii ay isdhaafsadeen: Maxamed Rooble wuxuu ku dhashay tuulada Kooraar ee degmada Bardaale Silsiladdaha caan baxay waxaa ka mid ah Guba. Sparad i dina bevakningar. Waxyaabaha kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare, bulshada Soomaali waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed iyada oo loogu magac daray Qarankii Gabayada.
Masraxiyaddii Aqoon Iyo Afgarad: Maxamuud Cali Beenaleey ayaa jeer niman ay isku raas ahaayeen ku qoddeeyeen inuu Silsiladda Rayad ee aan kor kaga hadalnay uu mid ama laba gabay ku darsado. Waxaa ku noqday Banfis oo yidhi isagoo qoyskiisa la hadlaya: